IVA 30T စက်ရုံသုံး ရေခဲထုတ်စက် (၁၀၀% အသစ်)
IVA 30T ရေခဲထုတ်စက်(၁၀၀% အသစ်) ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်ရဲ့ ခေတ်ရှေ့အပြေးဆုံးနည်းပညာနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။
စံနှုန်း- ISO 9001:2015
မူလ- Viet An/ Vietnam
ထားသိုနိုင်သောသက်တမ်း- ၁၅ နှစ်
မော်ဒယ်- IVA 30T
အမြိုးအစားခှဲခွားထားသောနရော: ရခေဲထုတျစကျ , ၄၀,၀၀၀ USD ဒျေါလာအထကျ , Hot
ကုနျပစ်စညျးရဲ့ ကုဒျနံပါတျ: IVA30T
IVA30T 30ton Industrial Tube Ice Making Machine - the best product in Vietnam.
IVA 30T ၃၀ တန် စက်ရုံသုံး ရေခဲထုတ်စက်- ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွင် အကောင်းဆုံး ပစ္စည်း
Video of an ice-making machine
IVA စတိန်းလက်စ်စတီး ရေခဲထုတ်စက် ထုတ်လုပ်ခြင်း ဗီဒီယို
Members of Viet An Company
Viet An ကုမ္ပဏီမှ အဖွဲ့ဝင်များ
Currently, there are several ice maker manufacturers in the water processing industry. Among which, Viet An is one of the leading brands in the South East Asia market in general and Vietnam market in particular. Viet An’s quality, technology, and price all catch up with other advanced countries globally. Viet An is offeringawide range of ice-making machines with various capacities to meet diverse customer demands. Also, Viet An is continually updating new technology into production to bring our customers the highest quality products.
ယခုအခါ ရေလုပ်ငန်းလောကမှာ ရေခဲစက်များ ထုတ်လုပ်သူတွေ များပြားလာပါတယ်။ ၄င်းတို့ထဲမှ Viet An က အရှေ့တောင်အာရှနဲ့ ဗီယက်နမ်ဈေးကွက်မှာ ဦးဆောင်နေတဲ့ ကုန်ပစ္စည်းတံဆိပ်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ Viet An ရဲ့ ကွာလတီ၊ နည်းပညာနဲ့ ဈေးနှုန်းတွေက ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများကို လိုက်မီပါတယ်။ Viet An မှ ဝယ်ယူသူများရဲ့ အကြိုက်တွေ့စေဖို့ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းမျိုးစုံရှိတဲ့ ရေခဲစက်အမြောက်အမြားကို ပေးပို့နေပါတယ်။ ထို့အပြင် ဝယ်ယူသူများဆီသို့ အရည်အသွေးမြင့် ပစ္စည်းများ ယူဆောင်လာပေးရန် နည်းပညာအသစ်များကို စဉ်ဆက်မပြတ် အဆင့်မြှင့်တင်နေပါတယ်။
To know more details about tube ice-making machines’ prices, ranging from mini machines to industrial machines, go to https://vietan.vn/may-lam-da-vien.
ရေခဲထုတ်စက်အသေးမှ စက်ရုံသုံးအထိ ဈေးနှုန်းတွေအကြောင်း ပိုမိုသိရှိဖို့ https://vietan.vn/may-lam-da-vien တွင်ဝင်ရောက်လေ့လာလိုက်ပါ။
Asaprestigious brand with nearly ten years in importing and distributing water filtration systems, ice-making machines, Viet An is proud to supply the premium products at competitive prices. IVA30T 30ton ice-making machines by Viet An are trusted by the customers in developed markets such as Japan, America, thanks to our unceasing efforts to innovate the technology.
ရေစစ်စနစ်များ၊ ရေခဲစက်များကို ၁၀ နှစ်နီးပါး တင်ပို့ ဖြန့်ဖြူးလာတဲ့ ကုန်ပစ္စည်းတံဆိပ်ဖြစ်တာနဲ့အညီ Viet An သည် ပရီမီယမ် ပစ္စည်းမျးကို ပေးပို့ရတာ အလွန်ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ နည်းပညာကို အဆင့်မြှင့်တင်တဲ့ စွမ်းအား မလျှော့ခဲ့တာကြောင့် IVA30T ရေခဲစက်ကို ဖွံ့ဖြိုးတဲ့ ဈေးကွက်များဖြစ်တဲ့ ဂျပန်၊ အမေရိကန်တို့မှ ဝယ်ယူသူများက ယုံကြည်စိတ်ချကြပါတယ်။
IVA30T - 30ton ice-making machine - the best ice-making machine ever
IVA30T-၃၀တန် ရေခဲထုတ်စက်- အကောင်းဆုံး ရေခဲထုတ်စက်
Despite its large capacity of 30T, the machine is smartly designed to be compact and convenient to install. We create the machine to produce high-quality ice of different types and dimensions to meet the customers’ various demands. The finished ice products all meet food hygiene and safety standards.
၃၀ တန်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းအပြင် ဒီစက်ကို တပ်ဆင်ဖို့ လွယ်ကူစေရန် သိပ်သည်းတဲ့ ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့က ဝယ်ယူသူများရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးရန် ဒီစက်ကို အရည်အသွေးမြင့်တဲ့ ရေခဲ ပုံစံမျိုးစုံ၊ အတိုင်းအတာမျိုးစုံ ထုတ်လုပ်နိုင်အောင် ပြုလုပ်ထားပါတယ်။ ထုတ်လုပ်ပြီးတဲ့ ရေခဲတွေကလည်း အစားအသောက် လုံခြုံစိတ်ချရမှုနဲ့ ကိုက်ညီပါတယ်။
Exclusive structure and outstanding function of an IVA30T -30ton ice-making machine
IVA 30T ၃၀ တန် ရေခဲထုတ်စက်ရဲ့ သီးသန့် ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ ထူးချွန်သော လုပ်ဆောင်ချက်
Only in Viet An, we use 100% new compressors to produce the ice-making machines. Meanwhile, almost all other suppliers apply old imported compressors into the assembly process. That is why our products have higher prices than others. Our compressors are manufactured in an automatic CNC system with automatic cutting, pressing, and molding processes. After that, it is transferred to the high-pressure testing machine - the best high-pressure testing machine imported from German.
ယခုအခါမှာ Viet An ကသာ ရေခဲထုတ်စက်တွေထဲမှာ ဖိသိပ်စက်အသစ်ကို အသုံးပြုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဖိသိပ်စက်တွေကို နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားပြီး ကြာရှည်အခံနိုင်ဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစက်ကို အော်တို ဖြတ်တောက် ဖိသိပ် ပုံသွင်း လုပ်ငန်းစဉ်တွေပါတဲ့ လုံးဝ အော်တို CNC စနစ်နဲ့ ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။
All the stop valves are solenoid valves directly imported from Danfoss (Denmark) with larger projected sizes than the required flow.
ရပ်တန့်အဆို့များအားလုံးက Danfoss (Denmark) မှ တင်သွင်းထားတဲ့ ကြေးနီအဆို့တွေ ဖြစ်ကြပြီး လိုအပ်သော စီးဆင်းမှုထက် အရွယ်အစား ပိုမိုကြီးမားပါတယ်။
The liquid and gas separation system is designed to separate the liquid from the inlet air to ensure no liquid remains in the air before it is routed into the airline for the compressor to operate smoothly, thereby improving the machine's shelf life.
အရည်နှင့် အငွေ့ခွဲထုတ်ပေးသော ကိရိယာကို အရည်နှင့်အငွေ့ကို ခွဲထုတ်ပေးရန်၊ လေလိုင်းမှာ မလည်ပတ်ခင် လေထဲတွင် အရည်မကျန်စေရန် ဒီဇိုင်းဆင်ထားပါတယ်။ သို့မှသာ ဖိသိပ်စက်က ချောမွေ့စွာ လည်ပတ်နိုင်ပြီး စက်ရဲ့ သက်တမ်းရှည်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
The electrical system used for Viet An’s ice-making machines is automatic. With this innovation, the engine will automatically operate or stop according to pre-programming. For the best operation process, it is recommended to installa3 phase - 380V power supply.
Viet An ရဲ့ ရေခဲထုတ်စက်မှာ အသုံးပြုတဲ့ လျှပ်စစ်စနစ်က လုံးဝ အော်တိုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အင်ဂျင်က အကြို ပရိုဂရမ်အတိုင်း အော်တို လည်ပတ်ပြီး ရပ်ပါတယ်။ ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ လုပ်ဆောင်မှုအတွက် ၃ ဆင့်- ၃၈၀ ဗို့ ပါဝါပေးပို့မှုကို တပ်ဆင်ဖို့ အကြံပေးပါတယ်။
One of the main factors affecting ice price is energy cost during the manufacturing process. IVA30T 30ton ice-making machines apply the United States’ most advanced technology to save energy up to 45% compared to other ice-making machines in the market. Thanks to energy cost-saving, the manufacturers can reduce ice price and increase competitiveness.
ရေခဲရဲ့ ဈေးနှုန်းအနည်းအများက ထုတ်လုပ်နေစဉ်အတွင်း အင်နာဂျီကုန်ကျမှုနဲ့ သက်ဆိုင်ပါတယ်။ IVA 30T ၃၀ တန် ရေခဲထုတ်စက်များက အမေရိကန်ရဲ့ နည်းပညာကို အသုံးပြုထားပြီး ဈေးကွက်က အခြားစက်များထက် အင်နာဂျီ ၄၅% ထိ ချွေတာပေးပါတယ်။ အင်နာဂျီကုန်ကျစရိတ်သက်သာတဲ့အတွက် ထုတ်လုပ်သူများအနေနဲ့ ဈေးနှုန်းလျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။
IVA30T 30ton ice-making machines are produced in an automatic and close cycle, ensuring that the ice quality satisfies food hygiene and safety requirements.
IVA30T ၃၀ တန် ရေခဲထုတ်စက်များကို အော်တို သီးသန့် စက်ဝိုင်းထဲမှာ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် အစားအသောက်ရဲ့ ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်မှု၊ လုံခြုံစိတ်ချရမှုတို့နဲ့ ကိုက်ညီပါတယ်။
အခိုးကို အရည်ဖြစ်စေသည့် ကိရိယာ
Viet An’s condensers are 100% new. This is also an essential part of an ice-making machine.
Viet An ရဲ့ အခိုးကို အရည်ဖြစ်စေသည့် စက်က ၁၀၀% အသစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ၄င်းက ရေခဲထုတ်စက်ရဲ့ မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အပိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
The cooling tower’s main task is to transfer heat from the water outside to make the cooling time shorter and save energy.
The cooling towers are made from high-quality stainless steel to make the machine shiny and durable.
The ice tank shell is 8mm thick, and the ice tank tube is 1.5mm thick. They are all made from stainless steel and are 100% new.
R22/R404A gas used by Viet An is imported from India.
အေးစေသောတာဝါရဲ့ အဓိက လုပ်ဆောင်ချက်က ရေထဲမှ အပူကို ပြောင်းရွှေ့ပေးပြီး အေးပေးသောအချိန်ကို ပိုတိုစေကာ အင်နာဂျီကို ချွေတာပေးရန် ဖြစ်ပါတယ်။ အေးစေသောတာဝါများကို အရည်အသွေးမြင့် စတိန်းလက်စ်စတီးနဲ့ ပြုလုပ်ထားပြီး တောက်ပကာ ကြာရှည်ခံပါတယ်။ ရေခဲတိုင်ကီရဲ့ အခွံက ၈ မီလီမီတာ ထူပြီး ပြွက ၁.၅ မီလီမီတာ ထူပါတယ်။ ၄င်းတို့အားလုံးကို စတိန်းလက်စ်စတီးနဲ့ ပြုလုပ်ထားပြီး ၁၀၀% အသစ်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ Viet An မှ အသုံးပြုတဲ့ R22/R404A အငွေ့များကို အိန္ဒိယမှ တင်သွင်းပါတယ်။
Energy-saving Stainless steel shells make the engine perform stably and reduce cooling time.
The cooling system complies with international standards and brings high durability. No bacteria are remaining thanks to optimal cleaning technology.
အင်နာဂျီချွေတာပေးတဲ့ စတိန်းလက်စ်စတီး အခွံများက အင်ဂျင်ကို တည်ငြိမ်စွာ လုပ်ဆောင်စေပြီး အေးပေးသောအချိန်ကို လျှော့ပေးပါတယ်။ အေးပေးသော စနစ်မှာ နိုင်ငံတကာ စံနှုန်းများ အသုံးပြုထားပြီး ကြာရှည်ခံစေပါတယ်။ အကောင်းဆုံး သန့်ရှင်းပေးတဲ့ နည်းပညာကြောင့် ဘက်တီးရီးယားတွေလည်း မကျန်ရှိပါဘူး။
Above are some of the latest technologies typically used for Viet An’s ice-making machines. They make the production process much quicker, convenient, and cost-effective. These exclusive technologies are only available in Viet An. Thanks to these products’ great benefits, they have been widely chosen despite the high prices. With these new machines, you can remarkably save energy and reduce production time. With these new machines, you can immensely save energy and reduce production time.
အပေါ်မှာ ဖော်ပြထားတာတွေက Viet An ရဲ့ ရေခဲထုတ်စက်တွေအတွက် အသုံးပြုတဲ့ နောက်ဆုံးပေါ် နည်းပညာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ၄င်းတို့က ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်ကို ပိုမိုလျင်မြန်စေပြီး အဆင်ပြေချောမွေ့စေကာ အကုန်အကျလည်း နည်းစေပါတယ်။ ဒီပစ္စည်းတွေရဲ့ ကြီးမားတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေကြောင့် ဝယ်ယူသူအများစုရဲ့ ရွေးချယ်ခြင်းကို ခံရပါတယ်။ ဒီစက်အသစ်တွေကြောင့် အင်နာဂျီကို အံ့သြဖွယ်ကောင်းအောင် ချွေတာနိုင်ပြီး ထုတ်လုပ်မှု အချိန်ကိုလည်း လျှော့ချနိုင်ပါတယ်။
We apply the most advanced and exclusive technology to our ice-making machines—exclusive ice-making technology, which is only available in Viet An.
ကျွန်တော်တို့က ရေခဲထုတ်စက်တွေမှာ ခေတ်ရှေ့ပြေးသော အထူးသီးသန့် နည်းပညာကို အသုံးပြုထားပါတယ်။
The compressor (100% New) applied the most advanced technology.
ဖိသိပ်စက် (၁၀၀% အသစ်)မှာ ခေတ်ရှေ့အပြေးဆုံး နည်းပညာကို အသုံးပြုထားပါတယ်။
Liquid and gas separation system Reduce the line length, thereby reducing the ice-making process.
အရည်နှင့်အငွေ့ ခွဲထုတ်ပေးသောစနစ်က လိုင်းရဲ့အလျားကို လျှော့ပေးသောကြောင့် ရေခဲထုတ်လုပ်တဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်ကိုလည်း လျှော့ပေးပါတယ်။
The pump system (100% new) is made of 304 stainless steel with exclusive technology.
ရေစုပ်စက်(၁၀၀% အသစ်)ကို အထူးသီးသန့်နည်းပညာနဲ့အတူ စတိန်းလက်စ်စတီးနဲ့ ပြုလုပ်ထားပါတယ်။
The electronic valve system is imported from Danfoss company in Finland.
ဖိသိပ်စက်တွေရဲ့ လျှပ်စစ်အဆို့စနစ်ကို Finland မှာရှိတဲ့ Danfoss ကုမ္ပဏီက တင်သွင်းထားပါတယ်။.
All the components used in this machine are 100% new.
ဒီစက်မှာ အသုံးပြုထားတဲ့ အစိတ်အပိုင်းအားလုံးက ၁၀၀% အသစ်ဖြစ်ပါတယ်။
Viet An’s Industrial Tube Ice Making Machine (100% New) offers an amazing capacity of energy saving. Let's imagineanew and an old ice making machine with the same capacity, then:
Price of the old machine +2years of electricity cost
Price of 100% new machine +2years of electricity cost
After just above2years, the price of the old machine +2years of electricity cost will be equal or higher than the price of 100% new machine +2years of electricity cost. This does not include the expenses to resolve the errors during the operation with the old machine. During these2years, the old machine can generate stable performance while the old one cannot assure this. Even if there are no errors during the first2years, until the 3rd year, the old machine will surely operate much better than the old one. With above information, it’s your right to chooseanew or old machine.
Viet An ရဲ့ စက်ရုံသုံး ရေခဲထုတ်စက် (၁၀၀% အသစ်) က အင်နာဂျီချွေတာမှုကို အံ့သြဖို့ကောင်းအောင် ပြုလုပ်ပေးပါတယ်။ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းတူညီတဲ့ စက်အသစ်နဲ့ အဟောင်း ယှဉ်ကြည့်ရအောင်။
စက်အဟောင်းရဲ့ ဈေးနှုန်း+ မီတာခ ၂ နှစ်
၁၀၀% စက်အသစ်ရဲ့ ဈေးနှုန်း+ မီတာခ ၂ နှစ်
၂ နှစ်ပြီးသွားတဲ့ အခါမှာ စက်အဟောင်းရဲ့ ဈေးနှုန်း+ မီတာခ ၂ နှစ်က ၁၀၀% အသစ်စက်ရဲ့ ဈေးနှုန်း+ မီတာခ ၂ နှစ် တူညီနိုင်သလို မြင့်လည်း မြင့်နိုင်ပါတယ်။ စက်အဟောင်းမှာ ဆိုရင် လည်ပတ်နေမှုအတွင်း ပြသနာပေါ်ပေါက်လျှင် ပြန်ပြင်တဲ့ ကုန်ကျစရိတ် မပါဝင်ပါဘူး။ ဒီ၂ နှစ်အတွင်းမှာ စက်အသစ်က တည်ငြိမ်တဲ့ လုပ်ဆောင်မှုကို ပေးနိုင်ပါတယ်။
သာမာန်အားဖြင့် ဖိအားသိပ်စက်အသစ်တွေကို အစားထိုးဖို့ ဗီယက်နမ်ငွေ ၁၃-၂၀ သန်း ကုန်ကျပါတယ်။ ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီ ၂ နှစ်အတွင်းမှာ အပျက်အစီးမရှိနိုင်ပေမယ့် ၃ နှစ်မြောက်အထိ စက်အသစ်က ပိုမို ကောင်းကောင်း လည်ပတ်နိုင်ပါတယ်။ အပေါ်က အချက်အလက်အရ စက်အသစ်နဲ့ အဟောင်း သင်ရွေးချယ်လို့ ရပါပြီ။
Learn more about an IVA30T 30ton Ice-making machine
IVA 30T ၃၀ တန် ရေခဲထုတ်စက်အကြောင်း လေ့လာကြရအောင်
Shape and dimension:
Manufacturing process and characteristics of tube ice: Compared to regular block or solid ice, tube ice hasanicer shape. You can feel the transparency of the ice when using purified water for the ice-making process. Tube ice has an outstanding advantage of long melting. Therefore, the tube shape is kept foralong.
ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ ရေခဲတုံး၏ ယေဘုယျ လက္ခဏာ- သာမန် အတုံးပုံ၊ အစိုင်အခဲပုံ ရေခဲနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် ကုဗတုံးပုံ ရေခဲက ပိုပြီးကောင်းတဲ့ ပုံစံရှိပါတယ်။ ရေခဲပြုလုပ်ဖို့ ရေသန့်ကို အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် ရေခဲက ကြည်လင်နေတာကို မြင်တွေ့နိုင်မှာပါ။ ကုဗတုံးပုံရေခဲက အချိန်အကြာကြီးအထိ အရည်မပျော်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ၄င်းရဲ့ ပုံစံကို အချိန်အကြာကြီး ထိန်းထားနိုင်ပါတယ်။
The tube ice has various dimensions, in which average outer diameters range from 18 – 23 – 27 – 30mm, and cylindrical length ranges from 30 - 34 - 38 - 45 - 50mm. In most cases, the machine producesahollow pipe diameter of5- 10mm. However, depending on the customers’ requests, the manufacturer can consider adjusting the technical specification accordingly.
ကုဗတုံးပုံ ရေခဲမှာ ပျမ်းမျှ အပြင်အချင်း ၁၈-၂၃-၂၇-၃၀ မီလီမီတာနဲ့ စလင်ဒါအလျား ၃၀-၃၄-၃၈-၄၅-၅၀ မီလီမီတာ အရွယ်အစားမျိုးစုံ ရှိပါတယ်။ များသောအားဖြင့် ပိုက်အချင်း ၅-၁၀ မီလီမီတာ အရွယ်အစားအတွက် ထုတ်လုပ်ပေးပါတယ်။ သို့သော်လည်း ဝယ်ယူသူများရဲ့ တောင်းဆိုမှုအပေါ်မူတည်ပြီး ထုတ်လုပ်သူတွေက နည်းပညာဆိုင်ရာ ဖော်ပြချက်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပါတယ်။
Accessories (optional - purchase separately)
အအေး သိုလှောင်သော စနစ်
Storage dimension (mm) သိုလှောင်မှု အတိုင်းအတာ
Power capacity -(kw/h)ပါဝါလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း
Electricity supply - Voltage (V)လျှပ်စစ်အား ပေးပို့မှု- ဗို့အား
Outdoor unit အပြင်ယူနစ်
Indoor unit အတွင်းယူနစ်
White foam Panel covered with 2-layer cold corrugated iron
အလွှာ နှစ်ထပ် အအေးတွန့်ပေးသော အိုင်ယွန်း အဖြူရောင်ရေမြုပ်ဘောင်
The cold storage system utilizes white foam material covered with two thick layers of corrugated iron - the best panel. Also,asafety lock system is designed to ensureastable storage temperature of 4-9 degrees C, making the ice firm, not sticky when delivered to customers.
အအေးသိုလှောင်စနစ်က အလွှာ နှစ်ထပ် အအေးတွန့်ပေးသော အိုင်ယွန်း အဖြူရောင်ရေမြုပ်ဘောင်- အကောင်းဆုံးဘောင်ကို အသုံးပြုပါတယ်။ ထို့အတူ လုံခြုံသော သော့ခတ်စနစ်က အပူချိန် ၄-၉ ဒီဂရီ တည်မြဲသော သိုလှောင်မှု အပူချိန်ကို သေချာစေပြီး ဝယ်ယူသူများဆီသို့ ရေခဲကိုပို့တဲ့အခါ အရည်မပျော်စေဘဲ ခိုင်မြဲအောင်လုပ်ပေးပါတယ်။
Filtration capacity (m3/24h)စစ်ထုတ်နိုင်စွမ်း
Electricity supply - Voltage (V)လျှပ်စစ်ပေးပို့မှု-ဗို့အား
Weight -(Kg) အလေးချိန်
Water filtration system: To ensure the product quality, the customers can consider investing inawater filtration system using either Nano or RO technology.
ရေစစ်စနစ်- ပစ္စည်းရဲ့ ကွာလတီကို သေချာစေရန် ဝယ်ယူသူများက Nano သို့မဟုတ် RO နည်းပညာ အသုံးပြုထားတဲ့ ရေစစ်ကို ဝယ်ယူသင့်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ကို မည့်သည့်အချိန်တွင်မဆို ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
We offer full accessories for the customers buying ice-making machines of all capacities.
လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း မတူတဲ့ ရေခဲထုတ်စက်များ အားလုံးအတွက် ဝယ်ယူသူများကို အဆင်တဆာ အပြည့် ပေးပါတယ်။
Discount on buying cold storage when it comes along with an ice machine.
ရေခဲထုတ်စက်မှာ ပါတဲ့ အအေးသိုလှောင်စနစ်ကို ဒစ်စကောင့်ပေးပါတယ်။
Flexible payment methods, including cash payment or bank transfer through Vietcombank, Agribank, etc.
With modern machinery and professional, dedicated services, we are confident to provide domestic and foreign customers with the best products. Call us now at 0942.41.41.41 forafree consultation.
Vietcombank, Agribank ဘဏ်များမှ လွှဲတာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ငွေသားဖြင့် ပေးချေတာပဲ ဖြစ်ဖြစ် လုပ်ဆောင်နို်င်ပါတယ်။ ခေတ်မီသော ပစ္စည်းများနဲ့ ကောင်းမွန်သော ဝန်ဆောင်မှုများဖြင့် ကျွန်တော်တို့က ပြည်တွင်းပြည်ပ ဝယ်ယူသူများကို အကောင်းဆုံး ပစ္စည်းများ ပေးရတာကို ယုံကြည်မှုရှိပါတယ်။ ၀၉- ၄၂ ၄၁ ၄၁ ၄၁ ကို အခုပဲ ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။
IVA TUBE ICE MAKING MACHINE
A- PRICE OF THE ICE MAKING AND PACKAGING SET
ရေခဲထုတ်စက်နှင့် ထုတ်ပိုးမှုအတွဲ၏ ဈေးနှုန်း
Machine dimension (L*W*H mm)စက်၏အတိုင်းအတာ
Tube ice dimension (L*W*H mm)ရေခဲတုံး အတိုင်းအတာ
Power capacity (kw/h) ပါဝါလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း
Electricity supply (V) လျှပ်စစ်အား ပေးပို့မှု
Cold oil အေးသောဆီ
Packaging system ထုတ်ပိုးမှု စနစ်
Price -(USD) ဈေးနှုန်း
B- ACCESSORIES (OPTIONAL - PURCHASE SEPARATELY)
KL70 cold storage system
Storage dimension (mm)သိုလှောင်မှု အတိုင်းအတာ
Power capacity (kw/h)ပါဝါလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း
Electricity supply (V)လျှပ်စစ်ပေးပို့မှု
အအေးတွန့်လွှာ ၂ ထပ်ဖြင့် အဖြူရောင် အမြုပ်ဘောင်
VAMĐ 48T Water filtration system
VAMĐ 48T ရေစစ်စနစ်
Filtration capacity (m3/24h)ရေစစ်နိုင်စွမ်း
Power capacity (kw/h)ပါဝါလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း
Electricity supply (V)လျှပ်စစ်အားပေးပို့မှု
Hỏi đáp & đánh giá IVA 30T စက်ရုံသုံး ရေခဲထုတ်စက် (၁၀၀% အသစ်)
၄၀၀ ကီလိုဂရမ် ရေခဲထုတ်စက်ရဲ့ ဈေးနှုန်း(၁၀၀% အသစ်)
၆၀၀ ကီလိုဂရမ် ရေခဲထုတ်စက်ရဲ့ ဈေးနှုန်း(၁၀၀% အသစ်)
၈၀၀ ကီလိုဂရမ် ရေခဲထုတ်စက်ရဲ့ ဈေးနှုန်း(၁၀၀% အသစ်)
IVA 1Tရေခဲထုတ်စက်ရဲ့ (၁၀၀% အသစ်)
IVA2Tရေခဲထုတ်စက် (၁၀၀% အသစ်)
IVA3T ၃ တန် စက်ရုံသုံး ရေခဲထုတ်စက် (၁၀၀% အသစ်)
IVA 4T စက်ရုံသုံး ရေခဲထုတ်စက် (၁၀၀% အသစ်)
IVA 5T စက်ရုံသုံး ရေခဲထုတ်စက် (၁၀၀% အသစ်)
IVA 6T စက်ရုံသုံး ရေခဲထုတ်စက် (၁၀၀% အသစ်)
IVA 7T စက်ရုံသုံး ရေခဲထုတ်စက် (၁၀၀% အသစ်)
IVA 8T စက်ရုံသုံး ရေခဲထုတ်စက် (၁၀၀% အသစ်)
IVA 9T စက်ရုံသုံး ရေခဲထုတ်စက် (၁၀၀% အသစ်)
IVA 10T စက်ရုံသုံး ရေခဲထုတ်စက် (၁၀၀% အသစ်)
IVA 12T စက်ရုံသုံး ရေခဲထုတ်စက် (၁၀၀% အသစ်)
IVA 15T စက်ရုံသုံး ရေခဲထုတ်စက် (၁၀၀% အသစ်)
IVA 20T စက်ရုံသုံး ရေခဲထုတ်စက် (၁၀၀% အသစ်)
IVA 25T စက်ရုံသုံး ရေခဲထုတ်စက် (၁၀၀% အသစ်)